Ny tolo-kevitr'ireo artista ho an'ny fanontana Where is Wally an'ny coronavirus | Famoronana an-tserasera
ny Aiza ireo boky fanoharana Wally Niaraka taminay izy ireo nanomboka tamin'ny 1987 ary mahaliana fa tato anatin'ny andiany farany dia nihakely kokoa izany. Saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia nandroso lavitra kokoa ny tolo-kevitra famoronana nataon'i Pedro Mezzini sy Clay Bennet.
Ary izy rehetra mifandraika amin'ity coronavirus ity izay namatotra olona an-tapitrisany eran'izao tontolo izao ary efa nataony tamin'i Wally mahantra koa izany. Eny, aleo amin'ireo olona ireo izay nahazo aina tao aminy tsy lavitra ny mason'ilay nanandrana nitady azy.
Pedro Mezzini sy Clay Bennett dia nanome an'i Wally ny fanirery rehetra azo atao rehefa maneho ireo toerana banga tanteraka izay ahitany fa irery talohan'ireny fotoana miavaka ireny.
Ary ny marina dia sary mampalahelo be ilay izy ary milaza izay mitranga any amin'ireo renivohitra eropeana sasany avy any atsimo tahaka ny mitranga any Milan na Madrid tenany. Sehatra banga vitsivitsy izay mampiseho ny mampihoron-koditra ny fotoana ankehitriny ary toa herinandro maromaro kokoa noho izay tadiavinay izy ireo.
Ny halaviran'ny fiaraha-monina, ary efa hitantsika ireo andro ao amin'ny google logo ary ny marika famantarana malaza amin'ny marika malaza, dia iray amin'ireo fomba ialana amin'ny areti-mifindra sy izany ny virus coronavirus dia mitohy miely manerantany. Tsy io irery no fotoana hitadiavantsika tolo-kevitra famoronana amin'izao andro izao, satria ny fanagadrana ireo mpanakanto maro dia ahafahantsika mahita tolo-kevitra ho an'ny mpanakanto mahafinaritra.
Na izany na tsy izany, afaka foana isika mandehana fitsidihana an-tserasera amin'ireo tranombakoka manan-danja indrindra ny planeta; toy ity lisitra natombokay andro lasa izay ity ary ahafahantsika manatrika fanangonana kaliberaly marobe amin'ny Internet. Andro ho an'ny fahalalana sy ny fianarana Tompon'ny sary hosodoko. Mihaona izahay mandra-pahatongan'ny manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Aiza ny fanontana Wally coronavirus